Sida loo sameeyo infographic | Hal-abuurka khadka tooska ah
Sida loo sameeyo infographic
Mid ka mid ah agabyada ay tahay inaad ku soo jiidato dareenka muuqaal ahaan waa infographics. Haddii aad u fiirsato xisaabaadka shirkadda (ee shabakadaha bulshada) ku dhowaad dhammaantood waxay u adeegsadaan kuwan si ay u soo koobaan macluumaadka qaarkood iyo in aanay ahayn caajis, laakiin taasi liddi ku ah. Laakiin sida loo sameeyo infographic ah?
Haddii naqshadeeye ahaan uu mashruucani kuu yimid, ama aad tahay ganacsade oo aad rabto in aad haysato infographics aad ku tusi karto shabakadaha bulshada si ay u arkaan in aad mawduuc gaar ah u leedahay, tani waxay ku xiisaynaysaa. Hubaal waxa aanu kuu sheegayno waxaad ku garan doontaa waxaad samaynayso iyo sida.
1 Waa maxay infographic
2 Sida loo sameeyo infographic tallaabo tallaabo
2.1 Waxa la sameeyo ka hor inta aadan haysan template
2.2 Maxaa la sameeyaa ka dib
3 Halkee laga samayn karaa infographic
Waa maxay infographic
Laakin ka hor intaanan ku siin tillaabooyinka ay tahay inaad qaaddo si aad u abuurto xog-ururin, way kugu habboon tahay inaad si sax ah u garanayso waxa aan u jeedno.
Infographic waa hab lagu soo bandhigo xogta iyada oo aan la isticmaalin qoraalka oo keliya, laakiin maab, jaantusyo, sawirro, garaafyo, iwm. si xogta la bixiyo ay u noqoto mid fudud oo si sahlan loo fahmi karo. Xitaa waxa suurtogal ah in aad samayn karto nuxur is-dhexgal ah gudaha macluumaadka, adigoo u fahmaya tan si uu isticmaaluhu ula falgalo waxa ku jira (tusaale, garaafyada u dhaqaaqa si waafaqsan cursorka ama qoraalka soo muuqda marka uu hoos u sii socdo).
Shaki kuma jiro in ay tahay nuxurka sii xoogaysanaya iyo in si dhab ah loo isticmaalo dhammaan qaybaha. Dhab ahaantii, waxaa loo isticmaali karaa iyaga oo dhan. Habka ay u soo bandhigto natiijooyinka, si fudud oo madadaalo leh, xitaa xiiso leh, waxay sahlaysaa in la xasuusto. Intaa waxaa dheer, waxay si weyn u kordhisaa aragtida shabakadaha bulshada, gaar ahaan haddii ay la socoto carousel (dhowr sawir oo ku jira daabacaad isku mid ah).
Waxaas oo dhan, iyo wax ka badan, infographics ayaa si isa soo taraysa loo isticmaalaa. Iyo abuurista naqshado wanaagsan waa muhiim sababtoo ah haddii aysan soo jiidan dareenka waa wax aan faa'iido lahayn.
Laakiin sida loo sameeyo?
Sida loo sameeyo infographic tallaabo tallaabo
Infographic ma adka in la abuuro. Waxaad ka samayn kartaa meel xoq ah, ama waxaad qaadan kartaa template lacag la'aan ah ama lacag la'aan ah oo aad ku habeyn kartaa macluumaadka aad u baahan tahay. Laakiin dhammaan macluumaadka macluumaadka waxay leeyihiin sifo guud: siday u kala horreeyaan macluumaadka. Ma samayn kartid mid leh cinwaan beer-beereed oo xogtu waxay ka hadlaysaa dhaqaalaha, ciyaaraha fiidiyowga iyo suugaanta. Guri maya.
Sidaa darteed, halkan waxaan ku siinaynaa tillaabooyinka ka hor inta aanad helin template (ama abuurista).
Waxa la sameeyo ka hor inta aadan haysan template
Kahor intaadan bilaabin abuurista xog-ururin, waxa ugu horreeya ee aad u baahan tahay waa xog. Oo ma aha oo kaliya xogta, laakiin mawduuc. Xog-waraysigu waa in diiradda lagu saaraa hal mawduuc. Waxay noqon karaan xogta tirakoobka, sharax fikradda, soo koobaan dukumeenti... Laakiin maahan wax kasta oo isku mar ah iyo qaybo ama mawduucyo kala duwan.
Tusaale ahaan, waxaad samayn kartaa macluumaad ku saabsan tirada xayawaanka rabaayada ah ee qoysaska Isbaanishka haystaan; ama ku saabsan dhirta gudaha ku suntan bisadaha; ama natiijooyinka isticmaalka shabakadaha bulshada ee sannadkii hore. Waxaas oo dhan waxay noqon karaan kuwo caajis ah in la akhriyo, laakiin infographic oo leh muuqaallo, sawirro, garaafyo, iwm. xitaa waxay noqotaa madadaalo.
Taas macnaheedu waa inaad u baahan tahay inaad sameyso cilmi-baaris xog si aad u hesho waxaad u baahan tahay si aad u habayso fikradahaas oo aad u sameyso dukumeenti. Dad badan ayaa aaminsan in marka aad hesho macluumaadka, habeynta iyo bilaabista naqshadeynta infographic ay ku filan tahay, laakiin waxaan kugula talineynaa inaad sameyso tallaabadaas dhexdhexaadka ah, gaar ahaan bilowga sababtoo ah waxay ku siin doontaa aragti wanaagsan oo ku saabsan macluumaadka muhiimka ah iyo waxa ay noqon doonto. halkaas. in design.
Maxaa la sameeyaa ka dib
Markaad hesho macluumaadka oo aad ogaato qodobbada muhiimka ah ee aad ku dari doonto xog-ururinta, tillaabada xigta waxay noqon doontaa inaad hesho template infographic, ama inaad adigu abuurto.
Xaaladda kowaad, waxaad ka heli kartaa qaabab badan oo bilaash ah oo lacag ah. Taladayadu waa in aad doorato midka kuugu dhow nashqada suurtagalka ah ee aad maskaxda ku hayso sababtoo ah waxay kuu fududaynaysaa shaqadaada waxayna qaadan doontaa wakhti yar si aad u dhamaystirto naqshadeynta.
Haddii, dhanka kale, aad go'aansato inaad adigu sameysid, waxaan kugula talineynaa inaad haysato fikrad fikradeed, maaha inaad isticmaasho, laakiin si aad u dhiirigeliso. Oo yaa yidhi hal template, dhawr odhanaya oo mid walba ka soo qaado waxa aad jeceshahay si uu kuugu daro.
Naqshadaynta xogta macluumaadka ayaa laga yaabaa inay tahay waxa ugu badan ee ku qaadan doona. Oo waa inaad u fiirsato faahfaahinta qaarkood sida:
Ha koobiyayn qaabab kale. Waad ku dhiirigelin kartaa, laakiin ma koobiyeyn kartaa.
In dhammaan walxaha si fiican isku dhafan yihiin: sawirada, sawirada, qoraalka, iwm.
In midabku uu ku faraxsan yahay in la akhriyo isla markaana isla mar ahaantaana soo jiidata dareenka macluumaadka.
Qoraal xarrago leh, qoraal la akhriyi karo oo ka sarreeya wax kasta oo ku habboon mawduuca. Ha isticmaalin farta canabka ah haddii mawduucaagu uu ku saabsan yahay tignoolajiyada cusub mustaqbalka. Tusaale ahaan.
kheyraad cadaalad ah. Taasi waa, dib ha u dallacin. Kaliya walxaha lagama maarmaanka ah iyo si ay u awoodaan inay noqdaan kuwo fudud. Dhab ahaantii, infographics badan ayaa ku salaysan vector images iyo calaamadaha, laakiin si dhib ah u isticmaalaan sawiro.
Halkee laga samayn karaa infographic
Caadi ahaan, infographics waxaa lagu sameeyaa barnaamijyada tafatirka sawirka. Inkasta oo internetka aad ka heli karto qalab badan oo kaa caawin doona shaqadan waana bilaash. Intaa waxaa dheer, qaar badan ayaa heysta qaabab aad isticmaali karto haddii aad go'aankaas qaadatay.
Qaar ka mid ah kuwa aan ku talineyno waa:
Canvas Waa mid ka mid ah kuwa ugu caansan oo loo isticmaalo, ma aha oo kaliya in la sameeyo infographic, laakiin mashaariic kale oo badan. Dabcan, maskaxda ku hay in aad haysato nooca bilaashka ah ee xaddidan doona iyo nooca lacagta ah.
Aargoosi. Waa mid kale oo ka mid ah kuwa ugu isticmaalka badan. Nooca bilaashka ah waxaad samayn kartaa oo kaliya 5 infographics, laakiin way mudan tahay in la isku dayo. Iyo dheeri lagu daray: waa Isbaanish.
Fudud.ly. Tani waa qalab kale oo aad isticmaali karto oo ku siinaya qaabab kala duwan si aad u habayn karto oo aad u abuurto naqshadaada ugu dambeysa dhowr daqiiqo gudahood. Kadibna waxay kuu ogolaaneysaa inaad kala soo baxdo qaabab kala duwan ama si toos ah ula wadaagto internetka (waxaan kugula talineynaa doorashada koowaad).
Sida aad arki karto, samaynta infographic ma aha mid adag. Laakiin waxay u baahan tahay waqti, gaar ahaan bilowga, sababtoo ah si aad u aragto mid wanaagsan, waa inaad fiiro gaar ah u yeelataa dhammaan faahfaahinta muuqaalka oo aad maskaxda ku hayso, si uun, qaar ka mid ah mabaadi'da naqshadeynta garaafka taas oo ka dhigi doonta naqshaddaada mid qumman. . Ma ku dhiiratay?
Wadada buuxda ee maqaalka: Hal-abuurka internetka » General » Tababarada » Sida loo sameeyo infographic
Blogger ama Wordpress
Barnaamijyada naqshadaynta garaafyada bilaashka ah